Ongororo uye Kufanotaura | Martech Zone
Ongororo uye Kufanotaura
Muvhuro, Zvita 18, 2006 China, June 11, 2009 Douglas Karr
ProBlogger ine imwe inonakidza Boka Rekunyora Project. (Unogona kutora chikamu, zvakare!)
Darren yakafanana nekuva neyako murairidzi weblogging. Kazhinji handioni posvo pa ProBlogger izvo hazvisi zvepakutanga zvachose. Ini ndinofunga Darren anoburitsa yakashamisa kuyedza kuita kuti mablog ave nani muInternet.
Iri Boka Rekunyora Project ndeyekuuya neyekugadzira rondedzero, rant, nezvimwe zvewongororo dzegore rapfuura kana fungidziro yegore rinouya. Ndakafunga kuita zvishoma kugadzira uye kuyedza mubatanidzwa wezvose zviri zviviri. Pazasi iwe unowana zvangu zvewongororo yezvakanaka muna 2006 uye pfungwa dzangu pane izvo zvichave zvakanaka muna 2007. Chengeta ziso rako pane fungidziro dza2007, ndinofunga ndakaita basa rakanyatsonaka rekunyora kunze kwenzvimbo dzakasiyana blog inobata uye kufunga zvakadzama nezve mafambiro eimwe neimwe yemisoro iri kutora.
Nakidzwa! Semazuva ese, makomendi anotambirwa. Uye uve nechokwadi chekutevera pa ProBlogger saka iwe unogona kutarisa izvo vamwe vese vari kunyora nezvazvo.
Yakakura muna 2006
Yakakura muna 2007
Intel Mac ine XP
Intel PC ine OSX
Yakabatanidzwa Maitiro w / Email Webhu
Vanoshanda Vashandi Vanopa
Mutengi-Server kuburikidza neNet
Ini ndinobvumirana nezvakawanda zvekufungidzira kwako Doug, kunyangwe ini ndisiri kuona iyo Zune ichiita zvakanyanya mumusika wemedia player. Ndakanyora zvangu runyoro rwekufanotaura kweboka rekunyora chirongwa.
Rombo rakanaka nekufungidzira kwako kwekupedzisira 🙂
Ini zvechokwadi ndakabuda padivi paZune! Kunyanya ndichangotenga mamwe maiPod evana vangu eKisimusi. Ndiwo mufananidzo wangu.
Ndatenda nerombo rakanaka, ndinorida! Unoziva chero akanakisa anotaridzika ane makore 25-30 ekare mamionea ex-models anoda vanababa vakuru vasina varume vanofarira kublogi munguva yavo yese yakasununguka?
Kwete, asi kana ndikawana chero, ndichave nechokwadi chekuvatumira nenzira yako 🙂
Zvita 19, 2006 na12:01 PM
Ah, inzira yakanaka yekutumira fungidziro, ndinoida! Miganhu inoda kudzika mumutengo uye nekupa dzimwe sarudzo dzepamhepo, kusanganisira yakashandiswa musika chikamu seAmazon, kutosvika pedyo nekubata izvozvo.
Takapindawo muchirongwa ichi, mira mberi kana ukawana mukana!
Zvita 19, 2006 na9:10 PM
Imwe yekuenzanisa kwakanakisa kwandakanga ndaona kusvika zvino uye kufanotaura kwakanaka.Blog yako inotariswa zvino lol.
Neniwo ndakapindawo mumakwikwi aya.Ndangomirira darren kuti azviise munext post yake
Ndiri kudyisa bhurogi renyu
Zvita 19, 2006 na9:22 PM
Ndatenda, Amai Dhadha! Thanks Ashish!
Zvita 19, 2006 na10:15 PM
Usakanganwa kutarisa chinyorwa ichi pakupera kwa2007 🙂
Unotozondiyeuchidza. Ndangariro yangu haigari zvakadaro. 😉
Kufembera kwakanaka murume ... uye yakanaka blog ..
Ndatenda, Madhur! Irworwo rwemhinduro runondiita kuti ndirambe ndichienda!
Nice nzira yekufamba pamusoro pekufanotaura.
Wide Monitors - hongu, kutozviona.
Zune – Hmmm, ndave kutoda kutenga.
Zvita 28, 2006 na3:40 PM
Kunakidzwa nekuona kuti iPod inotsiviwa neZunes, sekunge Windows XP inobviswa neMac OSX.
Hausi kunyatsoona chinhu chekutanga chichiitika (uye chero zvingaite kwete nekukurumidza kudaro), asi chokwadi tarisira kuti yechipiri ive yechokwadi.
(Hei, izvo zvingareva kuti vese varidzi vePC vane iPod vaizowana IntelMac voiwiriranisa neimwe software yeMicrosoft? Hm…)